अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका मदनकृष्णलाई कस्तो छ? – हाम्रो देश
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका मदनकृष्णलाई कस्तो छ?
काठमाडौँ – कोरोना भाइरस संक्रमण भई अस्पताल भर्ना भएका वरिष्ठ कलाकार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। उनलाई तीनदिन अगाडि डिस्चार्ज गरिएको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले जनाएको छ।
अस्पतालबाट घर गएका मदनकृष्णको अवस्था सामान्य रहेको मदनकृष्णकी छोरी सराना श्रेष्ठले देश सञ्चारलाई जानकारी दिइन्। ‘हामीले स्वास्थ्य जटिलता नभएको अवस्था भएपछि घर ल्यायौँ। अझै नेगेटिभ आइसकेको छैन। चिकित्सकको निगरानीमा हुनुहुन्छ’ सरानाले भनिन्, ‘संक्रमण भएको लामो समय भईसकेकोले चिकित्सकले अब परिवारसँग बस्न मिल्छ भन्नु भएको छ, हामी बाबासँगै बसिरहेका छौँ।’
मदनको स्वास्थ्यको निगरानी गरिरहेका चिकित्सकले संक्रमण भएको ३० दिन भईसकेकोले परिवारका सदस्यहरुसँग बस्दा समस्या नपर्ने बताएपछि मदन परिवारको सदस्यसँग बसेको सरानाले बताइन्।
अस्पतालमा उपचाररत मदनलाई तीन दिन अगाडि डिस्चार्ज गरेको भए पनि पीसीआर रिपाेर्ट नेगेटिभ आएको छैन। ‘ज्यानले धेरै आराम खोज्ने रहेछ।’ सरानाले भनिन्, ‘बाबाले अलिअलि व्यायामहरु गरिराख्नुभएको छ। कमजोरी त धेरै हुने रहेछ।’
सरानाका अनुसार मदन रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै मिडियामा आउने विचारमा छन्। त्यसैले आफूलाई निको बनाउन लागिपरेका छन्, पूर्ण रुपमा आराम गरिरहेका छन्। उनलाई खाना राम्ररी रुचेको सरानाले बताइन्।
मदनकृष्णको परिवारका पाँचैजनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण वैशाख ६ गते पुष्टि भएको थियो। संक्रमणपछि होम आइशोलेशनमा बसेका श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि वैशाख १० गते नेपाल मेडिसिटीमा भर्ना गरिएको थियो। उपचार पछि उनी वैशाख १७ गते घर फर्केका थिए।
त्यति बेला कोरोनालाई सामान्य रुपमा नलिन आग्रह गर्दै मदनले भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसको केही दिनमा नै स्वास फेर्न गारो भएपछि उनी पुन: अस्पताल भर्ना भएका थिए। मदनका छोरा यमनका अनुसार उनको अक्सिजन लेभल ८५ आसपास पुगेको थियो। मदनलाई ‘रेम्डेसिविर’ औषधि चलाइएको थियो। मदनका परिवारका बाँकी सदस्य भने सामान्य जीवनयापनमा फर्किसकेका छन्।